पुष ८, २०७८ बिहीबार
सङ्क्रमित दर बढेसँगै सरकारले बुस्टर डोज(तेस्रो खोप) लाई पनि तीब्रता दिएको छ । मङ्गलबार मात्र नौ लाख ६८ हजारजनाले बुस्टर डोज लिएको बीबीसीले जनाएको छ । तेस्रो खोपले ७०/७५ प्रतिशतसम्म भाइरसबाट सुरक्षित राख्ने विश्वासका साथ यसलाई तीब्रता दिए पनि सङ्क्रमण दर भने बढिरहेको छ । यसैबीच, सरकारले इङ्ल्याण्डमा नयाँ नियम लागू गरेको छ । जसअनुसार मिलेसम्म घरबाटै काम गर्ने, इनडोर र भिडभाड हुने स्थानमा मास्क अनिवार्यलगायतका नियम छन् ।
बुस्टरले केही काम गरेको देखिएको छ, अन्यथा सङ्क्रमण दर अझ बढ्न सक्थ्यो, बेलायतमा रहनुभएका वरिष्ठ् जनस्वास्थविद् प्रा.डा. पदम सिम्खडा भन्नुहुन्छ, ‘अहिलेको नयाँ भाइरसबाट बालबालबालिका, युवा, खोप नलगाउने र सतर्कता नअपनाउने बढी सङ्क्रमित भएको पाइएको छ ।’ बेलायतमा बालबालिकाले खोप नलगाइसकेको र युवाले पनि दोस्रो/तेस्रो खोप नपाएको अवस्थामा ती वर्ग सङ्क्रमित हुँदा उल्लेख्य मात्रामा सङ्ख्या बढेको हुनसक्ने उहाँको आँकलन छ ।
अघिल्लो भाइरसको तुलनामा ओमिक्रोन सङ्क्रामक रहेको बताउँदै प्रा.डा.सिम्खडाले नयाँ आएपछि पुरानो भाइरस कमजोर हुने स्वाभाविक रहेको पनि बताउनुभयो । पछिल्लो समयमा डेल्टा भाइरस सङ्क्रमितमध्ये ९० प्रतिशतलाई लागेको थियो, अब त्यही सङ्ख्या ओमिक्रोनले ओगट्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । तथ्याङ्कले पहिलेको तुलनामा अहिले सिकिस्त हुने र अस्पतालनमा भर्ना हुने दर कम रहेको बताउँदै उहाँले ओमिक्रोनले चाँडै आक्रमण गर्ने र चाँडै सन्चो गर्न सक्ने पनि प्रा.डा. सिम्खडा बताउनुहुन्छ ।
लिभरपुल युनिभर्सिटी हस्पिटलका चिकित्सक डा. शम्भु आचार्यले पहिलेका भाइरसभन्दा ओमिक्रोन बढी सङ्क्रामक रहेको बताउँदै कुनै पनि खोपले सय प्रतिशत काम नगर्ने भन्दै भन्नुभयो, ‘खोपले पूरै रोक्दैन तर जटिलता, अस्पताल भर्नादर र सङ्क्रमण दरलाई रोक्न भने सहयोग गर्छ । भर्नादर कम हुनासाथ मृत्युदर पनि कम हुन्छ ।’
बेलायतमा अहिले करिब तीन सयको हाराहारीमा नेपालीले सञ्चालन गरेका होटल तथा रेष्टुरेण्ट रहेको अनुमान छ । बेलायत सरकारले तत्काल बन्दाबन्दीको कुनै योजना नबनाएको जनाए पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमले क्रिसमसलगत्तै बन्दाबन्दी हुने समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । बीबीसीका अनुसार कोरोनाको दोस्रो लहरका समयमा(जनवरी १८ सम्म) अस्पताल भर्नादर ३९ हजार २५४ थियो, जुन अहिलेको तुलनामा पाँच गुणा बढी हो ।